विज्ञान/प्रविधि Archives -
एजेन्सी, आजकल सोशल मीडियामा जसको धेरै फलोअर्स हुन्छ, उनीहरु अरुको माझ छुट्टै दृष्टिकोणमा रहने गर्दछन् । त्यस्तै पछिल्लो समय सोशल मीडियामा लाखौ फलोअर्स बढाउने ट्रेन्ड चलेको छ । सामाजिक संजाल मध्ये इन्स्टाग्राम …
एजेन्सी, आईफोन स्लो भएको भन्दै धेरैले विवाद गरेपछि एप्पल कम्पनिले केहि दिन पहिले माफी मागेको थियो। र छिट्टै नै कम मूल्यमा ब्याट्री परिवर्तन गर्न सकिने प्रोग्राम शुरु हुने पनि घोसणा गरेको थियो। …
फेसबुक युजर्सको लागि खुसीको खबर: अब यसरी चिन्न सकिने फेक आईडी!
पुष ०७, २०७४ NK-Bigul Media
एजेन्सी, आफ्नो यूजर्सको लागि फेसबुकले फेरी अर्को एक नयाँ फीचर ल्याएको छ जसको मद्दतले अब फेक आईडीको बारेमा सजिलैसँग पत्ता लाग्नेछ । यो नयाँ फीचरले झुटो एकाउन्टबाट आउने फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई पनि रोक्नेछ । फेसबुकको …
अब अनुमतिबिना तपाईको फोटो अरु कसैले फेसबुकमा राख्न नपाउने, आयो यस्तो नयाँ फिचर!
पुष ०६, २०७४ NK-Bigul Media
फेसबुकले अब फेरी एक नयाँ फिचर ल्याउने भएको छ । जुन प्राइवेसीसँग सम्बन्धित हुनेछ । फेसबुकले आफ्नो यूजर्सको प्राइवेसीलाई लिएर र फेसबुकमा भएको अनेक बिकृतिलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ निर्णय लिएको छ …
पुष ०५, २०७४ NK-Bigul Media
एजेन्सी, अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रख्यात शोशल साइट फेसबुकले दिन प्रति दिन आफ्नो युजर्सहरुलाई नयाँ-नयाँ सुविधाबाट अपडेट गराउदै गएको छ। साथै युजर्सहरुको सुरक्षाको लागि पनि नयाँ-नयाँ फिचरहरु ल्याएको छ । हालै फेसबुकले एक सूचना …
एजेन्सी, गूगलले आफ्नो गूगल म्यापलाई एकपटक फेरि अपडेट गरेको छ । गूगल म्यापमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा राम्रो र शानदार फिचर ल्याएको छ । यस फीचर आए पश्चात तपाइलाई गूगल म्यापले तपाइको डेस्टिनेशन आएको बताउने …
यसकारण अब मार्क जुकरबर्गलाई पनि फेसबुकमा ब्लक गर्न मिल्ने !
पुष ०३, २०७४ NK-Bigul Media
एजेन्सी, विश्व चर्चित शोशल साइट फेसबुक दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुदै गईरहेको छ । साथै फेसबुकले आफ्नो युजर्सहरुको सुविधाको लागि नयाँ-नयाँ अपडेटहरु पनि ल्याउदै गईरहेको छ । फेसबुकमा यदि हामी कुनै व्यक्तिबाट …
पुष ०१, २०७४ NK-Bigul Media
काठमाडौं, भारतका एक १७ वर्षीय युवकले एकदमै अनौठो आविष्कार गरे देखाएका छन् । सिद्धार्थ मंडल नाम गरेको ती युवक भारतको हैदराबादमा बस्दछन् । उनले महिला अथाव युवतीहरुलाई शुरक्षा प्रर्दान गर्ने …
एजेन्सी, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुकले हालै ‘टीकर’ फिचरलाई हटाएको छ । २०११ मा लन्च गरिएको यो फिचरले फेसबुकमा तपाईको साथीहरुले के-के गरिरहेका छन् भन्ने कार्यलाई ट्रयाक गर्ने काम गर्थ्यो …
इन्स्टाग्रामले यस शानदार फिचरलाई हटाउदै ल्यायो यस्तो नयाँ एप !
मङि्सर २७, २०७४ NK-Bigul Media
एजेन्सी, इन्स्टाग्रामले अब नयाँ एपको परिक्षण गरिरहेको छ । इन्स्टाग्राम कम्पनीले अब डायरेक्ट म्यासेज फीचरलाई हटाएर मेसेजको लागि छुट्टै एप ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त एपमा स्न्यापच्याटको झैँ फिचर हुनेछ जसको मद्दतबाट …
राजेश हमाल महानायक हुन् भन्दै उनको निवासमा टिका थाप्नेको भिड, विदेशी समेत आइपुगे !
१८ मिनेट अगाडि RT
१७ घण्टा अगाडि RT
विवाह भएको पहिलो वर्ष यस्तो देखियो अभिनेत्री श्वेता खड्काको दशैँ, हेर्नुहोस् तस्बिर सहित!
२३ घण्टा अगाडि RT
आज कार्तिक १ गतेबाट बुध ग्रहले आफ्नो चाल परिवर्तन गर्दै, यी ५ राशिलाई लाभै लाभ!
हावा शुद्धिकरणको साटो घरमा लगाउननुहोस यी ५ विरुवा, बनाउनेछ हावा शुद्द
१ हप्ता अगाडि NK-Bigul Media